/Blog/Gallery/Synephrine HCL Powder - kitapo matavy ary fihenan'ny lanjany
Posted on 11 / 25 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ankehitriny, ny isan-jaton'ny isan-jaton'ny mponina dia mitady safidy hitazonana ny lanjany mahasalama. Eny, eo amin'izy rehetra dia ny fampiasana ny Synephrine HCL poids dia iray amin'ireo fomba azo antoka indrindra hitandremanao ny tavy mahasalama tsy mahomby. Synephrine vovoka dia tamboho simika alkaloida tsy dia fahita. Izy io dia akora voajanahary hita ao anaty zavamaniry toy ny voasary makirana, anelanelan'ny hafa.
Ny firafitry ny molekiola na Synephrine dia mitovy amin'ny ephedrine, izay iray amin'ireo singa matavy matavy indrindra. Na izany aza, Ephedrine tsy misy intsony eny an-tsena toy ny sakafon'ny sakafo; noho izany, Synephrine no mpisolo azy tsara indrindra. Octamine dia ny metabolitao na i Synephrine ary efa nalaza noho ny fananany matavy matavy.
Synephrine dia mpikatroka malemy ho an'ny alpha-1 sy alpha-2 adrenoreceptors. Ny fiasa roa amin'ny alàlan'ny famaliana ny adrenalinina amin'ny fampiakarana ny tosidan'ny rà sy ny fon'ny olona. Noho izany, ny Synephrine 5985-28-4 dia tsy azo inoana fa hiteraka fitomboan'ny fitomboan'ny fonao na ny fiakaran-dra.
Izany no fahasamihafana lehibe eo amin'ny ephedrine sy Synephrine 5985-28-4, satria ny ephedrine dia fantatra fa manetsika ny alpha-1 sy ny alpha-2 adrenoreceptors mahery.
Ny Synephrine HCL dia mandrisika ihany koa ireo andrim-bidy amin'ny neuromedin U2. Ireo dia molekiola hita ao amin'ny hypothalamus ary mampitombo ny fifohazana.
Ny Synephrine dia miasa amin'ny alàlan'ny fampijanonana ny famokarana eotaxin-1. Izany no molekololika izay manome fihetsika ny eosinophiles mba hifindra any amin'ny faritra marefo. Mandrakotra ny hetsika oxidase NADPH, izay novokarin'ny neutrophil ary koa, mamorona karazana oksizenina reaktif.
(1) Synephrine HCL ho an'ny fatiantoka
Ny tavy tafahoatra dia tsy vitan'ny aretina ara-pahasalamana ihany fa mety hahatonga anao tsy ho tomombana ihany koa. Ny tavy may dia misy tombony be dia be, ao anatin'izany ny mahatonga anao miaina lava kokoa. Soa ihany, ny fampiasana Synephrine HCL dia iray amin'ireo tetika efa voaporofo azonao ampiasaina hanalefahana ny tavy amin'ny vatana. Ity misy fomba manampy azy hahatratra io tanjona io;
Tsy mila miditra ao amin'ny gym ianao ary mahatsapa reraka sy matory; Synephrine no nahazo anao. Miasa toy ny solika amin'ny alàlan'ny famelomana anao amin'ny angovo rehetra ilainao amin'ny fivoriana fanazaran-tena mpamono. Ny totozy nitantana Synephrine powder tsikaritra fa afaka nilomano ela kokoa, izay mampiseho fa nitombo ny herin'ny angovo.
Amin'ny fanatsarana ny ambaratonga angovo dia fantatra ihany koa ny Synephrine hanatsarana ny fanaovana atletisma koa. Ny fiantraikany mitambatra amin'ny fitomboan'ny angovo amin'ny tavy sy ny famporisihana dia mampiroborobo ny fampivelarana ary mampitombo ny habetsaky ny vokatra azo avy amin'ny fampiofanana aerobika sy anaerobika Izany no mahatonga azy io ho fanampim-pahalalana mialoha pra-workout sy a Fanala tavy koa.
Izany no dingana manapotika ny fatrany ao amin'ny vatana. Tsara kokoa ny ilazana fa metabolism. Ny Synephrine dia miasa amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny mari-pahaizana metabolika ka mahatonga ny solika fandoroana haingana haingana. Manazava ny antony mahatonga ny fahazoana ny Synephrine hahatonga anao handoro matavy kokoa satria rehefa avo ny metabolism, ny vatanao dia azo tratrarina kokoa ho an'ny fatiantoka voatahiry.
Ny fatran'ny Synephrine HCL dia miovaova amin'ny olona iray mankany amin'ny olona iray. Na izany aza, ny fitsipi-pahaizana mahazatra ho dipoavatra is 100mg isan'andro. Ny fikarohana anefa dia mampiseho fa ny dosephrine HCL faran'ny 35mg dia mandaitra koa. The Fatra amin'ny Synephrine HCL tsy tokony hihoatra ny 200mg ao anatin'ny iray andro mba hisorohana ny poizina.
Ho an'ny vokatra fanamafisam-peo Synephrine na ho mpandoro tavy dia tokony ho azonao antoka fa ny zavatra maraina dia dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny telo-polo minitra alohan'ny fanatanjahan-tena. Tsiahivina ianao haka rano azy ireo.
Raha ny olona sasany no te handray ny Synephrine, ny hafa kosa dia aleony manao izany. Azonao atao ny mampiasa azy io mitambatra amin'ny fatran'ny enta-mavesatra hafa sy ireo izay manangona ny herinao. Yohimbine dia mifikitra tsara amin'ny Synephrine, indrindra raha ny lanja no tanjonao voalohany.
Tsy isalasalana fa ny Synephrine HCL dia fasana masina amin'ny fatiantoka lanja. Manampy amin'ny fametahana ny fanirianao izany raha mikendry ny tsy hihinana ianao na hampihena ny fihinanana sakafo tsy mahasalama. Azonao atao mihitsy aza ny manapa-kevitra hampihena ny filanao sakafo Synephrine supplementes adiny efatra amby roapolo raha te hanana endrika haingana ianao.
Raha ampiasaina miaraka amin'ny sakafo sy fanatanjahan-tena tsara ianao, ho hitanao ny fanamafisam-peo Synephrine sy ny fihenan'ny lanjany ao anatin'ny roa herinandro ampiasaina. Ho an'izay miady amin'ny fandrombenana, ny fihinanana tafahoatra, na ny mahatsapa fa te-hanala tavy amin'ny vatany, ity no tena be!
Ankehitriny ianao dia tapa-kevitra mafy ny hanatratra ny tanjonao lanja, aiza ianao no mahazo an'io mpandoro matavy io? Araka ny nampanantenain'ny orinasa maro fa hanolotra anao ny Synephrine tsara indrindra, dia mila mitandrina ianao satria mety misy mivarotra aminao vokatra sandoka. Manome lanja anao amin'ny vola izahay amin'ny fanomezana anao ny menaka Synephrine izay azo antoka sy mahomby. Indray mandeha mividy Synephrine avy aminay, matoky ianao fa handoro tavy ary ho very haingana sy maharitra mandrakizay.
Ny tambin-tsakafo mavesatra amin'ny lanjany dia tsy misy atahorana satria izy ireo dia 100% voajanahary ary tsy misy fiovana miafina. Mandidia ny vovobony mampihena ny lanjan'ny 'fahagagana' ankehitriny ary manary ireo kilao tsy ilaina ary koa mankafy ny tombontsoa amin'ny fanatanjahan-tena Synephrine.
Ny torolàlana ara-pahasalamana momba ny sakafo ara-pahasalamana, nataon'i Shawn M. Talbott, Kerry Hughes, pejy 13